Kukwira mukadzi wemunhu muTrain – Vanoda Zvinhu
Kukwira mukadzi wemunhu muTrain
Ndakasvira mumwe musikana mutrain tichienda Bulawayo last week, ndopandakaziva or when i confirmed kuti Beche Rinonaka. Akaramba kana kundiudza zita rake achiti arikuenda kumurume wake and this was just a last time thing coz she wanted to be faithful to hubby after that.
Mwana uyu aiziva kuhandler mboro, aitambisa chiuno achipepeta zvekuti unoridza mhere nekunakirwa. Sezvo ndakanga ndabooker sleeper, it was just ini naye imomo saka noise yetrain yaivhara kuchema kwese kwandayiita. She was open too, akanditi “ndoda undisvire 3 rounds tisati tasvika Bulawayo, 1 Mukadoma, 1 Kwekwe and 1 MuGweru!”
Nhau iyi yakatanga tiripaStation takamirira chitima and like always the train was late. Takataura tikati “zim trains are always late” and that is how we got to talking. Ndakamuti i booked sleeper coz ndoda kuzorara iye akati ane normal seat. I invited her kuti auya kuSleeper kwangu if she wanted to rest… Akaseka akati “are you not afraid of me, what if ndikakumukira husiku?” Ndakati i was not worried abt that coz ini i was planning kumukira iye… We both laughed and at that moment takapinda mutrain. Akabva angonditevera kuSleepr kuya and we sate down talking.
Musikana uyu anga asina kunaka zvinoshamisira zviya but anga ane mazizamu mahombe, kawaist kadiki asi anemacurves. Akatanga kutaura nhau yake yekuti anopinda church kwaMarange and was forced to get married kuBulawayo nevabereki vake. Ndipo paakati “ndoda undisvire 3 rounds tisati tasvika Bulawayo, 1 Mukadoma, 1 Kwekwe and 1 MuGweru!”. At first ndakati ijoke iye akati she was serious. I asked why she wanted 3 rounds and she replied me kuti she was coming from tete vake vanga vachimudzidzisa zvesviro uye kuti murume anobatwa sei saka she wanted practice asati asvika kumurume wake. I said i would be happy to help her with her practical lessons.
Tichisvika muKadoma ndiye akabva atanga kubvisa blouse rake, ndakasekerera ndakatarisa munda wezamu, akanditi bata unzwe, ndakati handimirire second invitation ndokubata ndokuisa mukanwa ndokutanga kusveta. Akayemerera akabata mboro yaku achindikisser muhuro. Pasina kupera nguva tanga takusvirana and chokwadi aibva kumalessons coz aiziva pekubata kuti ichanyomirira, aiti kana ndakuda kutunda aibva asenser oti lets change. Ndakanakirwa nebonde musi uyu! Kwekwe same thing and patakazosvika Gweru ndanga ndakutomuti “i love you” nekunakirwa nebeche. Handisati ndambonakirwa zvakadaro, i pleaded with her kuti andipe zita rake nenumber akaramba akati its a one time thing. Takasvika paBulawayo station kuseni iye ndokuti Good Bye nekiss ndokuenda…..
Ndakasara muSleeper Coach muya and as i was packing up my things ndakaona kuti musikana uya anga akanganwa cellphone yake. ndakasekerera ndikati just maybe i will see her again….
Next story Sviro Short Story: Maprepaid meter akakonzeresa paBulawayo
Previous story Confessions of a Married woman: Chihure kutapira